China HDPE gasi mutopota fekitari uye vagadziri | Shengyang
HDPE gasi pombi yakasimba uye yakachengeteka, inonyanya kushandiswa mumaguta maginjiniya.
Kushandiswa kwakachengeteka kweanopfuura makore makumi mashanu.
Iyo PE mutopota ine elongation pakuzorora kweanopfuura 500%. Icho hachizoputika pasi peshanduko dzakasiyana dzesuburface senge kudzikira kwepasi nekudengenyeka kwenyika, uye ine chengetedzo yepamusoro. Vakafugama nharaunda (R≥15D), hapana chikonzero chegokora majoini, iri nyore pakuvaka.
◎ Cold kuramba
Iyo yakawiriranwa yekuwedzera coefficient ye PE pombi iri 1.5X10-4mm / mm ° C, uye kureba kwayo kunenge kusingakanganisike neshanduko tembiricha. Hapana shanduko yemuviri inoitika nyangwe -80 ° C. Inonyanya kukodzera kumatunhu anotonhora zvakanyanya.
Pe pombi inogona kushandiswa kumagetsi kusanganisa kana kupisa-kusungunuka kubatana. Kubatana kwaro kwakakwana, kwakasimba uye hakumbofi kwakadonha.
◎ ngura nemishonga
Kunyudza muhydrochloric acid pakushambidza kwemukati. Mune sulfuric acid (≤70%), nitric acid (≤25%), phosphoric acid, hydrofluoric acid, yakaoma acid (-10%) nemimwe mhinduro, mapaipi ePE haana kukanganiswa.
◎ Alkali uye zvisina kujairika munyu
Pe pombi inonyudzwa mune dzakasiyana lye, inorganic munyu uye mvura yegungwa pa60 ℃, PE pombi haigadzike.
◎ Zvinhu zvakasikwa
Pe pombi inogona kumira inogadziriswa solvents yakadai sehydrogen peroxide uye methyl peturu pane yakajairwa tembiricha, uye PE pombi haizokanganisa.
Pe pombi yakareruka uremu (chete 1/7 yesimbi pombi) uye ine mukana wakanaka wekuchinja. De16-De75 pombi inogona kukuvadzwa kuitira nyore kutakura uye kuvaka.
Hdpe Electro Fusion Gasi Inokodzera Pe Pipe Fitting
Hdpe Gasi Pipe Hdpe Tubing
Hdpe Gasi Mapaipi
Hdpe Pipe Yekutengesa Gasi
Hdpe Zvikwepa zveGesi
Heat-nemishonga polyethylene ematongerwo mutopota pamwe ...
CPVC simba waya bhachi
perforated simbi bhandi simba rinoumba pombi